7 Ama-Best Bachelor ne-Bachelorette Uhambo eYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 7 Ama-Best Bachelor ne-Bachelorette Uhambo eYurophu
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Isitimela Sokuvakasha eHungary, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Izikhangibavakashi Europe
Ukuhlela iqembu le-bachelorette noma iqembu le-bachelor nakanjani kuyingxenye engcono kakhulu yokuba yindoda noma i-maid enhle kakhulu yokuhlonishwa. Yini engajabulisa ukwedlula ukuhlanganisa yonke iqembu lezigilamkhuba ukuze uthole i-adventure emibi eYurophu? Ikakhulu ngaphambi kokuba labo abanenhlanhla eqenjini bahlale phansi.
I-Europe indawo enhle yokuthola amaphathi. Sikhethwe ngesandla 7 uhambo oluhamba phambili nolwe-bachelorette eYurophu. Ukusuka kohambo olunethezekile lwe-spa-themed to all-night party and hop hopping. Ngakho, nakanjani uzokwakha uhambo olushaya ingqondo kakhulu ngomakoti nomkhwenyana ozokuba.
1. IHedonistic Budget-Friendly Bachelor / Bachelorette eBerlin
Ngomcimbi omuhle kakhulu webha, IBerlin yindawo emnandi yohambo olujabulisayo noluthokozisayo nohambo lwe-bachelorette eYurophu.
IBerlin yaziwa ngamaqembu ayo anobuhlanya kanye ne-Oktoberfest futhi ilungele i-a ngempelasonto uthole. Ungaqala iqembu ngokuthola izithombe ezinhle zeqembu lezigilamkhuba e-East Side Gallery. Khona-ke, qhubeka kuhambo olwenzelwe umuntu noma uqonde futhi go bar hopping. Ngaphezu kwalokho, IBerlin iyikhaya le-spas ethile enhle, lapho ungakhukhula khona wonke umgoqo ngemuva kobusuku bokuhlanjululwa.
2. Bachelorette / Bachelor Uhambo oluya eAmsterdam
Kuyadumaza futhi kuyamangaza, I-Amsterdam yidolobha lesono laseYurophu kanye neparadesi elincane. Uma uhlela uhambo lwasentwasahlobo lwe-bachelorette oluya e-Europe, ke i-Amsterdam iyona ethandeka kunazo zonke. Imisele evuthayo, amakhaya anemibala namakhofi amahle, imizila yokuhamba ngebhayisekili, futhi nomkhosi wezimbali ngoMeyi. Zonke lezi zimangaliso zizokwenza umakoti azizwe ezulwini lesikhombisa.
Nokho, uma unentshisekelo ngempela sonto yokugubha izikhathi zokugcina zenkululeko, khona-ke i-Amsterdam ilungele iphathi yesipele yasendle. Qala eMyuzi Du Sexe esifundeni samalambu abomvu, bese uqeda ngesiphuzo nesidlo sakusihlwa. Ngakho, uhambo loku-bachelor oluya e-Amsterdam ngokungangabazeki luzoba uhambo olungalibaleki.
3. Bachelorette / Bachelor Uhambo oluya ePrague
Amantombazane nakanjani azokwazisa ukubukwa okuhle kwedolobha lasePrague, izakhiwo, futhi art. Ngaphezu kwalokho, IPrague iyaziwa ngezingadi zayo eziphezulu ze-notch kanye namabha we-cocktail. Lokhu kusho ukuthi imigoqo kaPrague isezindaweni ezihamba phambili futhi isebenzisa iziphuzo ezimnandi kakhulu nezobuqili eYurophu, Ngokwesibonelo, Ibha ye-Hemingway cocktail. Ngemuva kokuphuza iziphuzo ezimbalwa uma ufuna ubusuku obunzima ngempela, ikhanda ukuthola igama likaPrague elidume umhlaba wonke indawo yokuphila ebusuku. Ukwelapha lelo hangover lasekuseni, hlola indawo enhle yekhofi ePrague, Mug Cafe. okukhethekile wabo ocebile ikhofi iziphuzo kanye Ukudla okumnandi.
Nokho, uma ungafuni ukulahlekelwa ingqondo yakho ngobusuku be-booze, bese ulibangisa ngaphandle enkabeni yedolobha. I-Prague iyikhaya lama-thermals amaningi nama-spas lapho ungathola khona i-pamper ngokwakho ngemuva kokuvakashela i-an inqaba eyakhiwe. Lokhu nakanjani kuzokwenza umakoti-abe-uzizwe njengenkosazana phakathi inganekwane. Enye into enhle amadoda azoyithanda ngokuphelele ukuhamba komfula.
4. Uhambo oluya eBudapest
Ukwakhiwa okumangalisayo nomfula iDanube uwela ngaphesheya, yenza iBudapest ibe indawo emangalisayo ye-bachelorette nohambo lwe-bachelor.
Iziphuzo kanye nokuhamba ngomgwaqo ezansi komfula iDanube, ukuwela idolobha ngokubuka izakhiwo ezinhle kakhulu, ilungele iphathi ye-bachelorette ne-bachelor. Enye inketho enhle yimpelasonto yokuphumula ku-spa yokunethezeka namantombazane. I-Budapest idolobha elihle izinkambo zokudla, lapho ungazama khona iwayini likazwelonke kusuka ku-Eger noSomlo futhi unambitha izitsha zendabuko zaseHungary edilini lokugubha impilo eyodwa yokugcina.
I-Faust Wine Cellar ingenye yamaselula okudala eYurophu nalapho ungakhona ukujabulela amawayini amahle kakhulu futhi unambitha inyama yenkomo enomlomo nezinye iziphuzo.
5. Bachelor / Bachelorette Uhambo oluya eTirol
Ohambweni oluzayo futhi oluzothuthukisa kakhulu lwe-adrenaline-boosting bachelor oluya e-Europe, Isifunda saseTirol e-Austria siyindawo engcono kakhulu yokuya. Uzozwa sengathi ubuyela emuva kwimvelaphi. Ukuhlala uzungeze umlilo wekamu, ngaphandle kwekhabethe lakho lokhuni nge-barbeque neziphuzo. Uma iqembu lezigilamkhuba lifuna i adventure yokukhuphuka rock, kude, neminye imisebenzi eminingi yangaphandle, ke Area47, ukukhetha okuhle ngempelasonto yabantu bonke neqembu elikhulu.
I-Tirol ibuye iphelele uhambo lwe-bachelorette, ikakhulukazi uma uyindawo futhi ufuna ukuzwa imvelo kokunye izindawo ezinhle e-Europe. Ukubukwa okuhle nomoya omusha kulungele ukubopha futhi kwakheke izikhathi ezingenakulibaleka emahlathini nasezimpophomeni zeTirol.
UMunich ukuya e-Innsbruck ngeSitimela
ISalzburg to Innsbruck ngeSitimela
Oberstdorf to Innsbruck by Sitimela
IGrey to Innsbruck ngeSitimela
6. Ngaya Okhahlamba LwaseSwitzerland
Imibono ethokomayo, izintaba, izigodi, nezimpophoma ku Izintaba ZaseSwitzerland ziyisilungiselelo esihle sohambo oluphuphayo lwe-bachelorette eYurophu. Izintaba zaseSwitzerland zombili ziyipharadesi neDisneyland yeqembu lezigebengu. Ngokwesibonelo, uma iqembu lakho lithanda imisebenzi yangaphandle, lapho-ke ungahamba ushibhile uma kusebusika. noma, Ngokolunye uhlangothi, uma kuwuhambo lwentwasahlobo noma lwasehlobo, ke, ukuhamba, noma ukubanda emzaneni obukekayo yizinto ezimbalwa nje okufanele zenziwe kule ndawo enhle.
Ngenkathi uhambo lwe-bachelor nolwe-bachelorette oluya e-Swiss Alps lungase lube oluhle ukwedlula ukubuya ngempelasonto eBerlin noma ePrague, futhi kungaba lapho wenza khona izinkumbulo ezihlala impilo yonke futhi eziyigugu.
I-Basel ukuze Ihlukaniswe Izitimela
IGeneva ukuya eZermatt ngoZitimela
UBern ukuya eZermatt ngoZitimela
Lucerne to Zermatt by Izitimela
7. Bachelor / Bachelorette Uhambo To Aquitaine, France
Uhambo lwe-bachelorette ne-bachelor yithuba elihle lokuthola i-adventure, zama okuthile okusha bese wephula inqubo ematasa. Kungani ungakwenzi ngesitayela uhambe yonke indlela bese ubhebhetheka ekuphambeni? I-Glamping iyindlela emangalisayo ye-bachelor enengqondo yokushaya kanye nohambo lwe-bachelorette. Indawo yasemaphandleni yaseFrance iyindawo enhle yokwakha amatende ezindaweni ezisezingeni eliphakeme zaseMongolia ezindaweni ezimi kahle epulazini laseFrance nabangane bakho abakhulu.
Ichibi elingaphandle, izithelo, ibhulakufesi embhedeni, ikamu lomlilo, futhi ukuhamba ngebhayisikile uzungeze izintaba ezinhle konke kumayelana nokubuyela emuva kwemvelo kohambo lwe-bachelorette wonke umuntu azolukhumbula. Uhambo lweBachelorette ne-bachelor ngezinye zezikhathi ezinhle kakhulu empilweni yomuntu wonke. Ngakho, kufanele kugujwe ezindaweni ezinhle kakhulu emhlabeni futhi iYurophu ilungele ukuphupha noma i-bachelorette yasendle kanye nohambo lwe-bachelorette.
I-Nantes eya eBordeaux ngeSitimela
I-Paris kuya eBordeaux ngeSitimela
ILyon ukuya eBordeaux ngesitimela
IMarseilles eya eBordeaux ngesitimela
Kulula kakhulu ukuqeqesha ukuhamba eYurophu nokuhamba ngayo Londoloza Isitimela kunoma yikuphi lapho uya khona noma idolobha 7 izindawo ezihamba phambili zohambo lwe-bachelor.
Ngabe ufuna ukushumeka iposi lethu lebhulogi elithi “7 Best Bachelor And Bachelorette Trips in Europe” kwisayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-bachelor-bachelorette-trips-europe/ ‎– (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, you will find our most popular train routes – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / yona / de noma / es kanye ngezilimi ezingaphezu.
umabhebhana bachelorandbachelorette bachelorette BachelorettetripEurope BachelortripEurope TravelAlps TravelPrague travelswitzerland TravelTirol